अनशन तोड्दै डा. केसीले भने– जनतामारा विधेयक स्वीकार्य छैन – Health Post Nepal
२०७५ माघ १८ गते २०:०३
१६औँ सत्याग्रहको २४औँ दिन शुक्रबार बेलुका अनशन तोडेका डा. गोविन्द केसीले संसद्बाट पारित चिकित्साशिक्षा विधेयक जनतामारा र विद्यार्थीमारा भएको भन्दै त्यो आफूलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अस्पतालका कुचीकार अमृत पुजारीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका डा. केसीले १५औँ अनशनको सम्झौताविपरीत विधेयकमा जनस्वास्थ्य र विद्यार्थीविरोधी प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
सरकार मेडिकल माफियाहरुको वशमा परेर ७ वर्ष लामो संघर्ष र मिहिनेतबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु विधेयकबाट मेटाइएको डा. केसीको भनाइ थियो । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको घर पनि राख्दैन भनेजस्तै ७ वर्ष लामो निरन्तर संघर्षबाट स्थापित गरेका जनपक्षीय उपलब्धिहरु माफियाप्रेमी सरकारले सबै भत्कायो,’ डा. केसीले भने, ‘यही कार्यान्वयनमा आयो भने म एक मिलिमिटर पनि मान्दिनँ ।’
उनले अनशन तोड्नुको अर्थ विधेयकलाई स्विकार्नु नभएको भन्दै सम्झौताअनुुसार नै जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखेर संशोधन नगरिँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने र आवश्यक परे १७औँ अनशन बस्ने समेत चेतावनी दिए ।
उनले जनताको स्वास्थ्य र विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने विधेयक नबन्दासम्म लडिरहने समेत बताए । ‘जनतालाई म आग्रह गर्छु जनताको हकहित स्थापित गरेरै छोड्छु,’ उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म लडि नै रहन्छु ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई जनताको पक्षमा रहने भन्दै विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरे । ‘मलाई विश्वास राष्ट्रपति ले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘भएन भने, म त सत्यवादी मान्छे, जसका विरुद्ध पनि लड्छु ।’ ।
यसअघि विज्ञाप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री इमान्दार नभएको भन्दै उनको निर्णय क्षमता र पदमा वस्ने नैतिकतामा समेत प्रश्न गरेका थिए ।
यसअघि डा. केसीलाई अनशन तोड्न लागि नागरिक अगुवाका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेललगायतका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, रेजिडेन्ट चिकित्सक, चिकित्सक संघ नेपाललगायतका अन्य शुभेच्छुक एवं समर्थकले बारबार आग्रह गरेका थिए ।
अनशन तोड्न राजी भएसँग सहयोगीले कार्यक्रम तय गरेका थिए । सहयोगी डा. सुमन कार्कीले डा. केसीका तर्फबाट जारी विज्ञाप्ति पढेर सुनाएपछि डा. केसीले छोटो भनाइ राखेका थिए । उनले सुरुमै अनशन र आन्दोलनका क्रममा विरामीले केही दुःख पाएको भन्दै क्षमायाचना गरेका थिए । त्यसपछि उनी सुरुमा सरकारप्रति आक्रामक देखिएका थिए । मन्तव्य टुंग्याएपछि डा. केसीले मिडिया र उपिस्थित शुभेच्छुकलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे । डा. केसीलाई थप उपचारका लागि आइसियूमा सारिने सहयोगी डा. सुमन आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुकै रोहवरमा म १६औ पटकको आमरण अनशन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु । साथै हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खूला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामवासी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।